Ungayigcina kanjani intshebe yakho yezinsuku ezintathu iphelele | Amadoda aSitayela
Usuvele uthathe isinqumo, futhi ufuna ukwenza ifayela le- ukubukeka kwentshebe yezinsuku ezintathu, kodwa kukhona okukhathazayo. Ngingayigcina kanjani iphelele ngaphandle kokukhalipha kakhulu? Ingabe kufanele ngiyinqume nsuku zonke?
Intshebe yezinsuku ezintathu idinga ukunakekelwa nokunakekelwa okuthile, sizofunda ukuthi singayenza kanjani ukuyigcina iphelele ngaphandle kokukubiza imali eningi noma isikhathi esiningi.
1 Ungayigcina kanjani intshebe yakho yezinsuku ezintathu iphelele
2 Okubalulekile okungu-5 ukunakekela intshebe yezinsuku ezintathu
Okokuqala, ngaphambi kokuba ukhule intshebe yezinsuku ezintathu, kufanele ucabange ukuthi leso sitayela sentshebe sikulungele yiniKungani ufuna ukukwenza? Ngabe uzokwazi ukuyigcina? Intshebe yezinsuku ezintathu ilungele bonke labo abanqena ukushefa nsuku zonke, noma labo abanobuso bengane futhi bakholelwa ukuthi intshebe yezinsuku ezintathu ingabanika ukubukeka okuvuthiwe. Lezi izinketho ezimbili ezinhle zalolu hlobo lokushefa, kepha uma ungakwazi ukuligcina, khohlwa ngakho.
Lapho sesinqume ukuthi sifuna ukuba nentshebe yezinsuku ezintathu, kubalulekile ukuthi sicabangele ukukhula kwemvelo kwezinwele zakho, uma ubona ukuthi kuzodingeka ukusika nsuku zonke, noma uma ukushefa ngezikhathi ezithile kuzoba mdala. Uma usuphethe intshebe yakho, kubalulekile ukuthi unakekele ikakhulukazi ingxenye engenhla yezihlathi nengxenye engezansi yentamo, ukuze izinwele zingakhuli kakhulu nesimo sazo, kepha njalo zinikeze ukubukeka, Ngamanye amagama, ungenzi okusemandleni akho ngokuqola intshebe ngokunembile.
Into enhle ongayenza ukususa lezi zinwele ezingeqile, ukuqinisekisa ukuthi i-gel yokushefa oyisebenzisayo ayigwebi ngesikhathi sokucheba, futhi ikuvumela ukuthi ubone ngokucacile okusele kwentshebe yakho.
Okubalulekile okungu-5 ukunakekela intshebe yezinsuku ezintathu
Ukuqothula. Sikhulume kabanzi ngalesi sinyathelo esiyisisekelo, futhi ukuthi ukukhululwa Kubalulekile ukunakekela isikhumba nokuhlanza ibala lesilevu. Ngale ndlela, uzosusa amangqamuzana esikhumba afile ukuze lapho ukushefa i-glide kubushelelezi.
Ukushefa ijeli Ngemuva kokukhishwa kahle, faka ijeli lokushefa endaweni lapho ufuna ukususa khona izinwele, bese ulishiya imizuzwana engama-30 ukuze intshebe ithambe ngokuphelele.
Kugundiwe. Manje yisikhathi sokususa intshebe. Gunda ngobumnene lapho kukhula khona izinwele. Ungasheshi, kwenze ngokucophelela ukuze ungasusi izinwele eziningi.
Gcina ubude bentshebe. Uphi umkhawulo? Intshebe yezinsuku ezintathu kufanele ibe yinde kangakanani? Akufanele uyishiye ifushane kakhulu noma yinde kakhulu. Gcina ubude obukuvumela ukuthi uyinqume futhi unakekele njalo ezinsukwini ezimbili, ngaphandle kokucindezelwa kakhulu.
Qaphela indawo yomhlathi. Kubo bonke abafuna intshebe emfushane, kubalulekile ukuthi babheke izinwele ezingaphansi komhlathi. Njengoba silwela ukugcina ukubukeka kwemvelo kwentshebe, kubalulekile ukuthi uphuce ngokulinganayo. Njengoba usebenza ngendlela engezansi komugqa womhlathi, qaphela uze ufike endaweni yentamo.
Indlela ephelele ye-athikili: Amadoda aSitayela » Ukunakekelwa komuntu siqu » Kugundiwe » Ungayigcina kanjani intshebe yakho yezinsuku ezintathu iphelele
Futhi igcinwa kanjani? Ngikukhumbule: /
Impethu emnyama kusho
Phendula ku-Black Maggot
Ihlobo lobuhlanga, 'iparisley' ihlobo (I)